DVB သို့ ဖြေရှင်းချက် | The World of Pinkgold
DVB သို့ ဖြေရှင်းချက်
Posted on September 1, 2008 by cuttiepinkgold
စာဖတ်သူအနေနဲက အခုပေးထားတဲ့ သတင်းကိုဖတ်ပြီး ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်။
ကိုဘလာဂေါက် ဆီကနေ ယူထားပါတယ်ရှင်။
Filed under MBS |	27 Comments
htat on September 2, 2008 at 6:34 am said:
qkdawmh owif;udk jyefvnfoHk;oyfr,fqdk&if—
မောင်ဒိုင်းနှင့် ထက်ကို ရေးသည်။ on September 2, 2008 at 9:43 am said:
ကျနော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါများသတင်းနဲဏ္ဍပါတ်သက်လိုဏ္ဍ အနည်းငယ်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်၊ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ဒီစာကို ကျနော်ပြန်လည်ရေးသားစရာကို အေ’ကာင်းမရှိပါ၊ (ဘာေ’ကာင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်သတင်း လုံးဝမှားယွင်းမှုမရှိဘူးလိုဏ္ဍ အ’ကွင်းမဲ့လက်ခံထားလိုဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်၊)သိုဏ္ဍပေမယ့် လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်ချေပခွင့်ရှိတယ်လိုဏ္ဍ ယူဆမိတဲ့အတွက် ဒီစာကိုရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊
အစကနေစပြောရရင် ဒီသတင်းကို မရေးသားခင် ၃ရက်လောက်အလိုမှာကတည်းက ဒီသတင်းကို ကျနော်ရထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ပိုပြီးသေချာအောင်နဲဏ္ဍ သေသေချာချာ ဃဃနန ပြောနိုင်မယ့် သတင်းရင်းမြစ်တွေကို လိုက်လံစုဆောင်းနေခဲ့တာပါ၊ ဒီသတင်းမရေးသားခင် အနည်းဆုံး မြန်မာပြည်တွင်းက ဘလော့လုပ်နေသူတွေရော ဘလော့ဂါတွေနဲဏ္ဍနီးစပ်သူတွေရော ၅ယောက်ထက်မနည်း စကားပြောပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတိုဏ္ဍတတွေကိုယ်တိုင်က သူတိုဏ္ဍအသံကိုမသုံးဖိုဏ္ဍ ကတိတောင်းထားသလို ပွဲပိတ်ခံရတာတော့ သေချာေ’ကာင်း အေ’ကာင်းပြန်’ကားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပက ဘလော့လုပ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့ မခင်မင်းဇော် ကိုဈာန် မမေငြိမ်းတိုဏ္ဍကိုလည်း စုံစမ်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ (သူတိုဏ္ဍလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေပါတယ် မေး’ကည့်လိုဏ္ဍ ရပါတယ်၊) သတင်းလုပ်မယ့်နေဏ္ဍမှာ သေသေချာချာပြောနိုင်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက သူဏ္ဍအသံကိုခွင့်ပြုေ’ကာင်းနဲဏ္ဍ နံမည်မပါရင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ခွင့်ပြုချက်ေ’ကာင့် အပိတ်ခံရတဲ့အေ’ကာင်း အဲဒီစာနယ်ဇင်းသမားအသံကို သုံးလိုက်ပါတယ်၊ သူတယောက်ထဲနဲဏ္ဍမေးပြီးရေးရင် မသေချာမှာစိုးလိုဏ္ဍ အခြားဆန်ဏ္ဍကျင်ဖက်ထောင့်ဖြစ်တဲ့ ‘ကီးမှုးကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျုတာပညာရှင်များအသင်း ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၂၂၇၆ကို ထပ်ပြီးဆက်သွယ်ပါတယ်၊ သတင်းထဲမှာသုံးထားတဲ့အတိုင်း အဲဒီဝန်ထမ်းက ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတာ ဟုတ်တယ်လိုဏ္ဍ ပြန်ဖြေတာကို အားလုံးလည်း သတင်းထဲမှာ ‘ကား’ကမှာပါ၊ နောက်သတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတော့ မြန်မာဘလော့ဂါတယောက်ပါ ၊သူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်တာပါ၊
၂၊ ‘ကီးမှုးကျင်းပမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပြူတာပညာရှင်များအသင်းက တာဝန်ရှိသူတယောက်က အပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုပြော’ကားတယ်၊
၃၊ ‘ကားနေသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပါတယ်၊
ဆိုတော့ ဒီသတင်းဟာ ဘယ်နေရာကမှားယွင်းနေပါသလဲ၊ အပိတ်မခံရတာကို အပိတ်ခံရတယ်လိုဏ္ဍ ရေးရင်တော့ ကျနော့်သတင်းအမှားပါ၊ အခုဟာက တကယ်အပိတ်ခံရတာကို အပိတ်ခံရတဲ့အေ’ကာင်းရေးတာကို မှားတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဟာတွေမှားသလဲဆိုတာ တိတိကျကျ အချက်အလက်နဲဏ္ဍ ရေးသားဖိုဏ္ဍလိုပါလိမ့်မယ်၊ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေရေးသလို ပိုက်ဆံရတိုင်းလုပ်နေ’ကတယ် စတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးဖိုဏ္ဍမသင့်တော်ပါ၊ သတင်းတပုဒ်လုံးကို သေသေချာချာ ပြန်လည်နားထောင်ပြီးမှ ကျနော့်ထံကို စာရေးသားစေချင်ပါတယ်၊ အသံနဲဏ္ဍလ$င့်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ကို နားမထောင်ပဲ ၀ဒ်ဆိုက်မှာရေးတာလောက်နဲဏ္ဍ ဝေဖန်မဆန်းစစ်စေလိုပါ၊ ကျနော့်သတင်းနဲဏ္ဍပါတ်သက်လိုဏ္ဍ ဒီလောက်ပဲ ပြန်လည်ရေးသားလိုပါတယ်၊ ဒီသတင်းဟာ လုံးဝမှားယွင်းတဲ့ သတင်းတပုဒ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ မျက်စိပိတ်မငြင်းဘူးဆိုရင် အားလုံးသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ မူရင်းအသံဖိုင်များပါ ပူးတွဲပေးပိုဏ္ဍ လိုက်ပါတယ်၊
(ထက်ရာဇာ။ ခင်ဗျား ဝင်းနဲ့ ရိုက်တာကို ကျုပ်ဇော်ဂျီပြောင်းပေးထားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လောလောဆယ် ခင်ဗျားက မမေငြိမ်းတို့ နာမည်ကို ခေါင်းခံထားတယ်နော်။ ဟုတ်ပြီ။ မေးကြည့်မယ်။
ပြည်တွင်းက ခင်ဗျား ဘယ်သူ့ကို မေးလဲ ကျုပ်သိပါတယ်။
မြတ်ခိုင်ဆီမှာ ရေးတဲ့ အထာတွေလိုတော့ သိပ်အကျင့်မပါနဲ့တော့ဗျို့။
စကားမစပ် မြန်မာပြည်ကနေ ခင်ဗျားထွက်မလာခင် သူများတွေ ဆီက ယူသွားတဲ့ အကြွေးတွေ ပြန်ဆပ်ဦး။ သံသရာပါမယ်။)
mmhomo on September 2, 2008 at 1:40 pm said:
ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေ က နိုင်ငံတော် အစိုးရတွေကို ဖဲ့ဖို့ လောက်သတင်းပဲရှာနေတာလားဗျာ။ ဖွတာတော့ဖွတာပေါ့ ကိုယ့် သတင်းကိုကိုယ်တာဝန်မယူနိုင်ပဲရေးတာတော့လွန်တယ်ဗျာ။
http://www.peoplemediavoice.com/content/view/357/192/ မှာဖတ်ကြည့်စမ်းပါဗျာ။ သူများတွေ စောစောစီးစီး အမှန်ပြင်သွားတာကို လေ့လာစမ်းပါ။ သင်ယူစမ်းပါ
ရက်ရာဇာ on September 2, 2008 at 2:49 pm said:
ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့်သတင်းဘယ်လောက်ခိုင်လုံလဲ နဲနဲစမ်းစစ်သင့်တယ်ထင်တယ်။ ခုလို အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ကြီး ပြောပြီးတော့မှသတင်းမှားတွေဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲ နောက် နှစ်ဖက်ကြားမှာ ရန်တိုက်ပေးနေသလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ ခုဒီသတင်းရေးတဲ့ သူ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး ကျွန်တော့်ထက်ကြီးချင်လဲကြီးမယ် ငယ်ချင်လဲငယ်မယ်ပေါ့ဗျာ။ သေချာတာတော့ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာန တစ်ခုကလူဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ထက် အသိအမြင်များတဲ့သူဖြစ်မယ်။အဲ ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲပေါ့ဗျာနော့။ တစ်ခုတော့အကြံပေးချင်တာကတော့ (မိချောင်းမင်းရေကင်းပြမိသလိုဖြစ်မလားမသိ)အများရှေ့မှာချပြမယ့် သတင်းတစ်ခုက ဘယ်လောက်ခိုင်မာမလဲ သေချာစမ်းစစ်ကြည့်သင့်တယ်ထင်တယ်နော်။
ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ အရမ်းရှက်မှာပဲဗျာ။အဲဒီတော့ ပညာရှိပီပီ မှားနေတာလေးကိုဝန်ခံလိုက်ပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် MCPA ဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ Seminar လုပ်ဖြစ်မဖြစ် သေချာမေးခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောသလိုဘယ်သူမှမဖြေခဲ့တာသေချာပါတယ်ဗျာ။
Pinkgold on September 2, 2008 at 3:49 pm said:
တစ်ခြားတော့ မပြောချင်ဘူး.. ရှင့်ရဲ့ သတင်း တိကျလား မတိကျလားဆိုတာ MICT နဲ့ IBC မှားကတည်းက သိနိုင်တယ်.. ရှင်ပြောသလို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘလောဂ့်ဂါတိုင်း၊ ဘလောဂ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နီးစပ်သူတိုင်း မနှစ်က စီမီနာ ဘယ်မှာ လုပ်ခဲ့လဲ သိတယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကို ပိတ်တာ စစ်အစိုးရကလို့ ရှင်တို့ သေချာရေးထားတယ်.. ပြီးတော့ MICT က ၀န်ထမ်းက ပြုလုပ်ခွင့် မပေးတာ ဟုတ်တယ်လို့ ပြောတယ်.. ဖုန်းဆက်ပြီး မေးကြည့်သူတိုင်း သိတယ်.. ၀န်ထမ်းတွေ အဲလို ပြန်မပြောခဲ့ဘူး… MICT က မကြီးမှူးတာပါ.. blogger တွေကတော့ လုပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှင်လို့ ပြန်ဖြေတာ ဖုန်းဆက်မေးသူတိုင်းကိုပါ.. အဲမှာ တစ်ချက် လွဲနေပြီး.. နောက်ပြီး ရှင်တို့ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတွေ ဘာကြောင့် ဘလောဂ့်ဂါကို အစိုးရနဲ့ ရန်တိုက်ပေးချင်တာလည်း.. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးနေနေတာ မမြင်ချင်ကြဘူးလား… ဘာကြောင့် တစ်စရ တစ်ရစပ် ဖွနေကြတာလဲ.. Blog ဟာ နိုင်ငံရေး သမားတွေရဲ့ ခုတုံး မဟုတ်ဘူး…
soe on September 2, 2008 at 4:06 pm said:
ထက်ချာတာတာ ကို ပြောချင်တာနဲ့ ဦးတို့ နိုင်ငံရေးဘလော့ တွေကို ခုတုံးလို့မပြောပါနဲ့ ဦးတိုက ဘလော့ကို ခုတုံးလို့မမြင်ဘူး စင်မြင့်လို့မြင်တာသမီးရဲ့ စိတ်ထိန်း ထက်ပိန်သွားဦးမယ်
Pinkgold on September 2, 2008 at 4:21 pm said:
ဟားးးးးးးးးးး ငါပိန်တာလည်း လူတိုင်းသိနေပါ့လား… ဦးဆိုတဲ့ ဦးရေ.. ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို မြင်လဲတော့ မသိဘူး.. လူတော်တော် များများကတော့ blogger ဆိုတာ နိုင်ငံရေး လုပ်နေတဲ့ သူတွေလို့ မြင်ကြတယ်… ဘယ်လို ပြောပြော မရဘူး… စိတ်လေတယ်…
mm thinker on September 2, 2008 at 5:56 pm said:
ခေတ်ကြီးက မကောင်းတော့ ဒီလိုပဲ
Eye on September 2, 2008 at 7:36 pm said:
၁။ “အပိတ်ခံရတယ်လို့ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်က ပြောတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။
၂။ “MCPA က အပိတ်ခံရတာကို အတည်ပြုပြောကြားတယ်” လို့ဆိုပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ အစိုးရက ပိတ်တယ်လို့ ပြောပါသလား။ ပြောတယ်ဆိုရင် အချက်အလက်အတိအကျ ပြောပါသလား။ MCPA က ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသမျှ အထဲမှာရော၊ ဖုန်းနဲ့မေးသူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြရာမှာရော အပိတ်ခံရတယ်လို့ သုံးနှုန်းသွားတာမျိုး လုံးဝမရှိပါ။ MCPA ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလို့ပဲ ပါပါတယ်။ ဘယ်သူက ပိတ်တယ်လို့ လုံးဝ မပြောပါ။
kyaw on September 2, 2008 at 8:37 pm said:
DVB က သတင်းကိုဖျက်လိုပြီ ဒါပေမယ့် မောင်ဒိုင်းက ကူးထားတယ် အမှန်ဆို DVB ကလည်းဖြေရှင်း သင့်တာပေါ့…
မေသူပိုင် on September 2, 2008 at 9:38 pm said:
ထက်ရာဇာ မဟုတ်ဘူး ထက် ပြသဒါးပါ
သူမေးမြန်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ အန်တီခင်မင်းဇော် အန်တီမေငြိမ်း ကိုဈာန်တို့စီဘောက်မှာလဲ အော်ထားပါတယ် ပြည်တွင်းကလူတွေ က အကျပ်အတည်း ကြားထဲကနေ လုပ်ရတာပါ သူတုိ့သတင်းမီဒီယာတစ်ချို့(အကုန်မပါပါ)ငမ်းငမ်း
တတ်သတင်းတွေလျှောက်ရေးလို့ ကိုနေဘုန်းလတ်တစ်ယောက်တော့ ထောင်ထဲေ၇ာက်သွားပြီ အခု ထက်ပြသဒါးကလဲ ဘယ်သူ့ကိုထောင်ထဲသွင်းချင်နေသေးလဲ ဆိုတာဘဲ မေးချင်တယ်
ဒေါက်တာလွမ်းဆွေ ဘလောခ်မှာ ဘယ်တုန်း က ဘာအကြောင်းအင်တာဗျုးထားတာမှန်းမသိတဲ့သူ့ပုံကြီးကို သောက်ရှက်မရှိတင်လိုက်သေးတယ်
* In Search of Truth * on September 3, 2008 at 5:42 am said:
မြွေကိုက်လို့သေတဲ့ ကိစ္စမှာ နအဖတာဝန်ယူသင့်တယ်ဆိုရင် ကိုထက်ရာဇာ သတင်းလိမ်ရေးတဲ့ကိစ္စ DVB အထက်ပိုင်းက လူကို နှုတ်ထွက်ဖို့မတောင်းဆိုသင့်ဘူးလား? ၀ါဒအတူတူဆိုရင် အဲလိုပဲလက်ပိုက်ကြည့်စတမ်းလား? 😛 ဒီမို=နအဖ
ဒီမိုမီဒီယာတွေ အဲဒီသတင်းကို အမှောင်ချထားသလား? ဘာကြောင့်လဲ? ဒီမိုမီဒီယာတွေ လူအတုတွေသုံးပြီး တယ်လီဖုံး အင်တာဗျူးအတုလုပ်တဲ့အကြောင်းပါ မီးခိုးကြွက်လျှောက်ပေါ်ကုန်မှာ စိုးရိမ်နေလို့လား? 😛
** မှတ်ချက် ။ ။ ဒီမိုကရေစီ၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ အာဏာရှင်စတဲ့ စံနစ်တွေဟာ အပေါ်ယံ မိတ်ကပ်လူးထားတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီိစံနစ်သုံးပြီး လူသတ်တဲ့အစိုးရတွေ၊ လဒ်စားတဲ့အစိုးရတွေ၊ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေနဲ့ ညှိစားတဲ့ ရဲတွေကို မြင်တွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်သာယာဖို့ဆိုသာ အဓိက ပြည်သူတွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒီမိုရမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်ပြောပြီး လူတွေငတ်အောင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားတာ အဲဒါရိုးသားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ နအဖကို စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားမျုိးကတော့ လူကြားကောင်းအောင် လိမ်လည်လှည့်ဖျားထားခြင်းသက်သက်ပါ။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ မွဲမသွားပဲ ပိုချမ်းသာလာနေတာ လူတိုင်းအသိပဲမဟုတ်လား? ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ နားလည်ကျမှာပါ။
ဗမာပြည်သား on September 3, 2008 at 6:40 am said:
soe on September 3, 2008 at 3:39 pm said:
မြန်မာ့အလင်းဆိုတဲ့ စောက်ရုးကလဲကြော်ငြာ လာဝင်နေသေးတယ် ဇော်မျိုးရေကိုယ့်ဟာကိုယ်နေပါ မင်းနဲ့ ထက်အာပလာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ အတူတူဘဲ ရိုးသားမှုမရှိ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ဖော်ခြင်နေတဲ့ကောင်တွေ
chim on September 3, 2008 at 4:29 pm said:
mmhomo,pinkgold နောက်ပြီး ရှင်တို့ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတွေ ဘာကြောင့် ဘလောဂ့်ဂါကို အစိုးရနဲ့ ရန်တိုက်ပေးချင်တာလည်း.. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးနေနေတာ မမြင်ချင်ကြဘူးလား.လို့ စည်းလွတ်ဝါးလွတ် နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေလို ၀ါးလုံးရှည်ကို ချီးသုတ်ပြီး ရမ်းနေတာတော့ မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်…ဘလော့တွေမပေါ်ခင်ကတည်းက သတင်းဌာနတွေဆိုတာ ပြည်တွင်းက ပြည်သူတွေ မသိတာ မမြင်တာတွေကို သတင်းပေးပို့ နေကြတာဖြစ်တယ် အခုက ထက်ရာဇာမကောင်းရင် ထက်ရာဇာပေါ့ ဒီဗွီဘီဆို ဒီဗွီဘီပေါ့ အကုန်လုံးသိမ်းကြူံးပြီး နအဖလေသံလ်ို ရန်တိုက်ပေးနေသည် လိမ်နေသည် ညာနေသည်လို့ တော့ မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာ
BlogGodFather on September 3, 2008 at 4:46 pm said:
ချဉ် (Chim) ဆိုသူရေ။
ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ပုပ်ရင် တစ်လှေလုံးပုပ်တာပါပဲ။
ဒီလိုပြောပုံထောက်ရင် ခင်ဗျားဟာ ဘာမှ မသိသေးဘူးဆိုတာ ထင်ရှားတာပဲ။
သတင်းထောက်တစ်ယောက်မှားရင် သတင်းစာတိုက်ဟာ တရားစွဲခံရတာ ထုံးစံပါပဲ။ ကံကွက်ကြား၍ ငမိုက်သားနင်လေ နင်ချည်းပင် ခံပေတော့ လုပ်လို့ မရပါဘူး။
ခင်ဗျားနာပုံက ဒီဝီဝီ လခစားအတိုင်းပဲ။
အဲဒီသတင်းဌာနမှာ ဆယ်တန်းမအောင်ပဲ လင်လေးယောက်ညားဖူးသူကို ဘာကြောင့် ခန့်ထားတာလဲ..ါးလေးတွေ သိအောင် အရင်လုပ်ပါ။
* In Search of Truth * on September 4, 2008 at 2:54 am said:
မြွေကိုက်တဲ့ ကိစ္စမှာ ဆရာဝန်ကို အလုပ်ဖြုတ်လို့ ဆူညံနေတဲ့ ဒီမိုသမားများ. . . .
လူကိုခင်လို့ မူကိုပြင်တာ မသင့်တော်ပါ။ ကိုထက်ရာဇာကို အလုပ်ဖြုတ်တာထက် DVB အထက်ပိုင်းက လူတွေကို အနားယူခိုင်းပါ။ လူမြင်လို့ကောင်းအောင် မူလေးကုိုတော့ လေးစားကျပါဗျာ။
kyaw on September 4, 2008 at 3:37 am said:
chim on September 4, 2008 at 8:08 am said:
ငါးခုံးမတစ်ကောင်ပုတ်ရင် တစ်လှေလုံးပုတ်တယ်ဆိုတာ မင်း ဘီဘီစီ အာအက်အေ ဗီအိုအေ အကုန်ပါလားပြော..မင်းတို့ေ၇းထားတာတွေက နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေလို့ အကုန်ပြောနေတာ..mmhomo ရေးထားတဲ့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေ က နိုင်ငံတော် အစိုးရတွေကို ဖဲ့ဖို့ လောက်သတင်းပဲရှာနေတာလားဗျာ ဆိုတာ ဘာစကားပြောတာလဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရလို့နအဖကို တရိုတသေပြောနေတာကို ငါပြောတာ ဟေ့ကောင် ပြီးတော့ pingoldကလဲ ရှင်တို့ နိုင်ငံခြား သတင်းဌာနတွေ ဘာကြောင့် ဘလောဂ့်ဂါကို အစိုးရနဲ့ ရန်တိုက်ပေးချင်တာလည်း.. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် အေးအေးနေနေတာ မမြင်ချင်ကြဘူးလားလို့ပြောထားတယ် အစိုးရ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ မင်းတို့ က တလေးတစား တရိုတသေ ဖင်မနေပြီး နအဖအကြိုက်စကားလုံးတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေလို့ အကုန် ချီးသုတ်ပြီး မရမ်းနဲ့လို့ ငါပြောတာ မင်းတို့ က တစ်ခုခုဆို အကုန်ဝိုင်းပြီး ရမ်းတုတ်နေတာတွေများနေတယ် ဘလော့ကာတွေထိမှာစိုးလို့ ပြောတာထက် အခုက နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကို အကွက်ဝင်တုန်း ၀င် ဆွမ်းကြီးဝင်လောင်းလိုက်မှ ဆိုတဲ့ အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ကို ပြင်ကွ…ငါက မင်းပြောတဲ့ ဒီဗွီဘီဝန်ထမ်းလဲ မဟုတ်ဘူး ဒါပေမယ့် မြင်နေရတာတော်တော် မဟုတ်လို့ ဝင်ပြောတာ တိုက်ရိုက်ပြောချင်ရင် မင်းလိပ်စာတင်လိုက် ငါမေးလ်ရှိတယ် လာခဲ့
Zaw on September 4, 2008 at 1:31 pm said:
ထက်အာပလာ သူတို့ဘာသာသူတို့ညံ့လို့ မဖြစ်တဲ့ဟာ မင်းက ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ဝင်ရှုပ်တော့ ငပွ DVB လည်းမြောင်းထဲရောက်တာပေါ့ ဟားဟား ငပွ ထက်အာပလာရှုပ်တာ မောင်ဒိုင်းနု့ ချင်းလဲစောက်စကားများ ရယ်ရတယ်
ကိုမင်းကျော် on September 4, 2008 at 2:21 pm said:
သတင်းမှန် မမှန် သိချင်ရင်တော့… အခမ်းအနားအတွက် ကုန်ကျငွေကို တာဝန်ယူ ပေးမယ်ဆို ရင် သိပါ လိမ့်မယ်။ ကုန်ကျငွေ တာဝန်ယူ ပေးမယ် ဆိုရင် အခမ်းအနား ကျင်းပဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မန္တာလေးမှ ဘလော့ဂါ ဒေး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း …
Zaw on September 4, 2008 at 2:57 pm said:
ပိုက်ဆံတော့ဘယ်သူမှပေးမှာမဟုတ်ဘူး မင်းကျော်ရေ ဒါနဲ့ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ တော်တော်ချာတာဘဲ ငါသာဆိုမုန့်ဝယ်စားပစ်တာ ခေါင်းရှုပ်ခံလို့ ဟေးဟေး
Pinkgold on September 4, 2008 at 4:33 pm said:
ဟာ.. ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့တော့ တော်ကြပါတော့.. ဘယ့်နှယ့် သတင်းမှားကြောင်းလေး ရေူးးမိပါတယ် ရှေ့ကြောင်း နောက်ကြောင်းတွေပါ ဖော်ပြီး ရန်ဖြစ်ကြတော့တာပဲ.. တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်.. ဒီလောက်ဆို တော်ကြပါတော့… ချဉ် ဆိုတဲ့ လူကလည်း တော်တော် စိတ်ကြီးတယ်.. အစိုးရကို အစိုးရ.. သတင်းဌာနကို သတင်းဌာနလို့ မပြောရင် ကျွန်မတို့က ဘယ်လို ပြောရမတုန်း .. ဘယ်လို ပါလိမ့်.. လူတွေများ တော်တော် ခက်တယ်..
* In Search of Truth * on September 4, 2008 at 7:53 pm said:
ဖွားပင့်.. ဒီမိုသမားတွေဘက်ကို မျက်နှာလိုက်တယ်ဗျာ။ ကျနော်ဆီပုံးမှာ ရေးထားတာ ဆဲတာတစ်ခုမှ မပါပဲ ဖျက်ပြစ်တယ်။ အဲလိုတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်ဗျ
soe on September 4, 2008 at 11:48 pm said:
သူတို့ဆွေးနွေးနေကြတာပါ အွန်လိုင်းပေါ် ထမချကြပါဘူး ဆွေးနွေးပါစေ ဟီးဟီး
ဒီဒီက on September 7, 2008 at 11:52 am said:
အင်း .. နာလာတာ နဲနဲနောက်ကျသွားတယ် .. ကွန်မန်ပတွေတောင် ဖျက်ပြီးနေပြီ … ပင့်ပင့်ရေ.. ပြောမလို့ပဲ .. နင်တော့ ပွပေါက်တိုးတော့မယ်လို့ …ဟီး
သူရ on October 10, 2009 at 3:39 am said: